बाजुराका ग्रामीण बस्तीमा फोन गर्न रुखमा चढ्नुपर्ने बाध्यता ! - Lekbesi Khabar
बाजुराका ग्रामीण बस्तीमा फोन गर्न रुखमा चढ्नुपर्ने बाध्यता !
बाजुरा: बाजुराका ग्रामीण बस्तीमा फोन गर्न रुख चढ्नुपर्ने र घण्टौ हिँडेर खबर आदानप्रदान गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । तर सदरमुकाम मार्तडीमा शुक्रबारदेखि फोरजी सेवा सञ्चालन आएको छ । नेपाल टेलिकमले ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो सेवा विस्तारमा ढिलाइ गरे पनि मार्तडी आसपास क्षेत्रमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आएको छ ।
माघसम्म देशैभर फोरजी सेवा पु¥याउने लक्ष्य रहेको जनाइएको छ । हालसम्म ६० जिल्लामा सेवा विस्तार गर्नेक्रम सकिएको र बाजुरामा सेवा जडान हुनेमा ६०औँ जिल्लामा परेको शाखा कार्यालय प्रमुख पदम बडालले जानकारी दिनुभयो ।
१९ माघ २०७६, आईतवार १२:४५ February 2, 2020
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ३०४ पुग्याे